Momba anay - Hebei Webian Medical Instrument Trading Co., Ltd.
Nahazo fankatoavana tamin'ny ISO9001 sy ny CE ho an'ny vokatra rehetra izahay.
HENGSHUI W SY B INSTRUMENTS MEDIC CO., LTD dia miorina amin'ny ozin'izy ireo misy fitaovana fitsaboana izay any amin'ny tanànan'i Hengshui, faritanin'i Hebei any Sina. Izahay dia mametraka ny orinasan'ny sampana antsoina hoe HEBEI WEBIAN INSTRUMENT TRADING CO., LTD izay any amin'ny faritany Shijiazhuang Hebei. Izahay dia mamokatra sy manondrana fikarakarana ara-pahasalamana sy vokatra orthopedic toy ny fanohanana Lumbar, fehin-kibo, fehin-kibo ara-pahasalamana ara-batana Tourmaline, fehikibo fanohanana fiterahana, fehin-kibo fanasitranana kibo Post, Ceraction Collar Traction, ondana rivotra inflatable Medina, crutches Medical sns. Ny tapany faharoa dia fitaovam-pitsaboana sy fanaka ara-pahasalamana toy ny fandriana hopitaly, kidoro manohitra ny fandriana ary fitaovana fitsaboana hafa mifandraika amin'izany.
Nahazo fankatoavana tamin'ny ISO9001 sy ny CE ho an'ny vokatra rehetra izahay. Ny mpivarotra anay indrindra dia aondrana any Eropa, Amerika, Afrika, Moyen Orient, Azia atsimo atsinanana, Japon, Korea Atsimo ary firenena sy faritra hafa. Izahay dia efa nanangana ny dingana famokarana sy fandinihana mandroso sy ny rafitra fitantanana kalitao manara-penitra iraisam-pirenena. Ny ekipanay R&D dia mivoatra am-pahavitrihana vokatra vaovao hihaona amin'ny takian'ny tsena isan-taona ary tsara amin'ny serivisy OEM.
"Fahombiazana, kalitao"no fitsipiky ny ozinina anay ary nahazo ny fitokisan'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao izahay.
Manantena hatrany ny fiaraha-miasa aminao!
"Forward Health" no LOGO antsika, midika hoe "Ho any amin'ny fahasalamana". antenaina fa ny vokatray dia afaka manome fiasa ho an'ny marary, avelao izy ireo hamerina amin'ny laoniny ny fahasalamana ary hanamora ny fiasan'ny mpitsabo.
Ny orinasanay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny ankehitriny, manizingizina izahay fa hanome vokatra kilasy voalohany, kalitao kilasy voalohany ary serivisy kilasy voalohany, heverinay fa io no fototra mafy orina amin'ny fiaraha-miasa maharitra.
Ny toerana misy ny orinasa any Hengshui City, Hebei, faritanin'i Sina. Hebei dia faritra famokarana vy, noho izany dia manana tombony izahay. Akaiky ny seranan-tsambon'i Tianjian izahay, ambany ny vidin'ny fitaterana. Afaka mamatsy ny mpanjifa ny vidiny mirary kokoa.
Mamokatra sy manondrana fitaovam-pitsaboana sy fanaka amin'ny hopitaly izahay toy ny fandriana amin'ny hopitaly, fitaovana fanampiana mandeha ary fitaovana fitsaboana hafa mifandraika amin'izany. Nahazo fankatoavana ISO13485 sy CE ho an'ny vokatra rehetra izahay. Ny ekipan'ny R&D dia mivoatra am-pahavitrihana vokatra vaovao hihaona amin'ny takian'ny tsena isan-taona ary tsara amin'ny serivisy OEM.
Miara-miasa amin'ny orinasa koreana atsimo izahay manomboka amin'ny taona 2018. Isan-taona dia manao fifanakalozana sy torolàlana teknika izahay mba hanatsarana bebe kokoa ny fizotran'ny teknika sy ny kalitaon'ny vokatra. amin'izay izahay afaka manome ny mpanjifa vokatra avo lenta sy tsara kalitao. Nahazo ny fitokisan'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao izahay.
Izahay avy amin'ny orinasa kely sy taloha taloha, aorian'ny fivoaran'ny 12 taona, nanangana orinasa maoderina vaovao izahay ary manara-maso ny trano fanatobiana entana. Ary eo an-dalam-panamboarana ny Factory Factory feno sy manan-tsaina. Nisy ny mpitarika ny faritany sy ny tanàna nanatrika ny lanonam-pamakiantsika tany. Ny orinasa Grace dia hapetraka amin'ny famokarana amin'ny 2021, koa mino izahay fa afaka manao zavatra bebe kokoa ho anao izahay amin'ny ho avy.
Avelao ny mpanjifa tsirairay ho afa-po amin'ny vokatray, ho an'ny mpanjifa.
Aza adino ny sain'ny vao manomboka
Mizara, ny fahombiazana dia azo averina tahaka ny serivisy ho fiaraha-miasa maharitra sy maharitra ho an'ity fitsipika ity.
Manana ny taratasy fanamarinana CE izahay ary nandalo ny fanamarinana ny rafitra kalitao ISO13485. ISO13485 dia tena mandresy lahatra amin'ny sehatry ny famokarana entana ara-pahasalamana. Pasipaoro hiditra amin'ny tsena iraisam-pirenena ity taratasy fanamarinana ity. Ary ireo mari-pankasitrahana ireo dia fanekena ny kalitaontsika. Izahay koa dia manome mari-pankasitrahana sy fanamarinana masoivoho mifanaraka amin'ny takian'ny tsena isan-karazany, mba hahatonga anao ho mpifaninana bebe kokoa eo amin'ny tsena.